China TS Chinyorwa Hydraulic Kuvhiya Mashandiro Tafura yeVachipatara vagadziri uye vanotengesa | Wanyu
Kusiyana neyakajairika tafura yekushandisa tafura, isu tinoshandisa hydraulic yekusimudza system uye gasi chitubu kugadzirisa kumashure uye makumbo mahwendefa. Ita maitiro ekugadzirisa zvese akanyarara uye ari nyore.
Iyo Y-yakaumbwa base inoshandiswa kuona iyo hydraulic tafura yekushandisa ine yakadzikama nzvimbo uye yemahara nzvimbo, kuitira kuti vezvekurapa vanogona kusvika murwere pazero kure.
Dhizaini yemavhiri makuru inoitawo kuti ive anti-vibration uye decompression panguva yekufamba.
1. Yepamberi Yekuyeuka Ndiro
Pamusoro pemvura ye hydraulic yekuvhiya tafura irimi murazvo unodzora uye anti-kunofambira mberi. Iyo yakaumbwa polyurethane (PU) metiresi iri nyore kuchenesa uye ine hupenyu hwakareba hwebasa.
2. Yakavakwa-muItsvo Bridge.
Pinza mubato mugomba rinoenderana, tenderera mubato uye gadzira chiuno bhiriji kukwira kana kuburukira panzvimbo yakakodzera, wobva waburitsa mubato. Kune TS hydraulic yekushandisa tafura, iko kukwirisa kwechiuno bhiriji kwapfuura 100mm.
Yepamberi Ndangariro Foam
3. Kunze Hydraulic System
Yakapinza hydraulic system kubva kuAmerica inoita kufamba kweyemanheru mashandiro tafura kugadzikana uye nekukurumidza.
4. Angular Akugadziridzwa wiyo Gsezvo Springs
Ose ari maviri ekumashure ndiro uye egumbo ndiro majoini eTS hydraulic anoshanda tafura ine gasi chitubu humburumbira rutsigiro zvivakwa, izvo zvinogadzirisa zvakasiyana-siyana zvinyoro, zvinyararire, uye zvisina vibration, nepo zvichinyatso kudzivirira chimiro chejoinhi uye kudzivirira murwere kuti arege kuwira.
5. Larger caster dhizaini
Hwaro hwemakanika hydraulic yekushandisa tafura yakagadzirirwa neakakura casters (dhayamita ≥100mm), inochinjika kufamba. Iwo makasitoma anomuka kana braking, hwaro hwebhedha huri mukubatana kwakasimba nepasi, uye kugadzikana kwakanaka.
4.Angular Kugadziriswa neGesi Springs
5.Makakura caster dhizaini
Model Item TS Hydraulic Inoshanda Tafura
Kureba uye Upamhi 2050mm * 500mm
Kukwidza (Kumusoro nekudzika) 890mm / 690mm
Musoro Plate (Kumusoro nekudzika) 60 ° / 60 °
Back Plate (Kumusoro uye Kuderera) 75 ° / 15 °
Gumbo Plate (Kumusoro / Kuderera / Kunze) 30 ° / 90 ° / 90 °
Yakazotevera Tilt (Kuruboshwe uye Kurudyi) 20 ° / 20 °
2 Kutsigira Muviri 1 Pair
3 Ruoko Rutsigiro 1 Pair
4 Zororo Rekuzorora 1 Pair
5 Ibvi Crutch 1 Pair
6 Kugadzirisa Clamp 1 Set
8 Bhandi reMuviri 1 Set
Pashure: TDY-1 China Electric Medical Inoshanda Tafura Mutengo weChipatara
Zvadaro: LEDD500 / 700C + M Ceiling LED Kaviri Dome Inoshanda Kamuri Mwenje neVhidhiyo-Kamera
TY Stainless Simbi Chinyorwa Hydraulic Kuvhiya Tab ...
TS-1 Stainless Steel Mechanical Hydraulic Opera ...